Julio Cesar Cano ။ စစ်ဆေးရေး Monfort ကိုဖန်တီးသူနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း လက်ရှိစာပေ
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 27/04/2021 12:00 | အင်တာဗျူး, စာရေးဆရာများ, ဝတ္ထုနက်
ဓါတ်ပုံ - Julio César Cano ။ Facebook ပရိုဖိုင်း။
Julio Cesar Cano, စစ်ဆေးရေး၏ဖန်တီးသူ Bartolomé Monfortထွက်သွားပါ ပဉ္စမ ခေါင်းစဉ်အမှု သေခြင်းသည်ပင်တည်ရှိသည်. Castellónတွင်သတ်မှတ်ထားသောစီးရီးများသည် ဆက်လက်၍ တည်ရှိသည် Plaza de la Farola တွင်လူသတ်မှု, မနက်ဖြန်ဘုရားသခင်နှင့်မာရ်နတ်လိုလျှင်, မင်းရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် y ပန်းပွင့်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ထိုကြံစည်မှုသည်အကျိုးဆက်၏နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် တစ် ဦး မီးရှို့မှု၏ဝန်ခံ နှင့်ကလေးဘဝသူငယ်ချင်းသုံးယောက်ပြန်လည်ဆုံဆည်း။
Julio César Cano သည် ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် Capellades (ဘာစီလိုနာ) တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးဂီတပညာရှင်တစ် ဦး အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်စတင်ရေးသားခဲ့သည်။ မန်နေဂျာ အုပ်စုများနှင့်ကွင်းဆက်အောင်မြင်မှုများထက်ပိုပြီးပြုတော်မမူ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောအချိန်နှင့်ကရုဏာကျေးဇူးတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုမှီပါ၏ ဒီအင်တာဗျူး.
Julio César Cano - လူတွေ့မေးမြန်းခန်း
အခုလက်ရှိ - ခင်ဗျားဟာဝတ္ထုအသစ်ကိုပဲထုတ်ဝေလိုက်ပြီ။ သေခြင်းသည်ပင်တည်ရှိသည်။ မင်းအဲဒီမှာငါတို့ဘာပြောတာလဲ
ဂျူလီယာကဲသာ Cano: ဒီ၌တည်၏ ပဉ္စမအရစ်ကျ Inspector Monfort ၏စီးရီးမှကလေးဘဝနှင့်လူကြီးဘဝကြား၌ပိတ်မိနေသောဇာတ်ကောင်များ၏ဖိနပ်ထဲတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထည့်ရန်ကြိုးစားသည်။ ၀ တ္ထုကလူတို့အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသောပျက်စီးစေသောစွမ်းအားနှင့်သက်ဆိုင်သည်အဘယ်စိတ်စွဲလမ်းမှုကမီးခိုးငွေ့တစ် ဦး ကိုသေစေလောက်သည့်အရိုးများဖြင့်လှောင်ပြောင်စေသနည်း။ မသင်္ကာဖွယ်မီးလျှံကိုမီးထွန်းရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ အလောင်းများကိုအဝတ်အစားတပ်ဆင်ရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေး၊ ငြိမ်သက်မှုနှင့်မိုးရေအတွက်ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းရန်လူတစ်ယောက်၏ဆုတောင်းချက်။
AL: ခင်ဗျားဖတ်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးစာအုပ်ကိုပြန်သွားနိုင်သလား။ မင်းအရင်ရေးခဲ့တဲ့ပုံပြင်လား။
JCC: မမှတ်မိဘူး၊ အဲဒါရှုပ်ထွေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့သေချာမှာပေါ့ ကလေးတစ် ဦး သို့မဟုတ်လူငယ်ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူတစ်ခုခု။ ကာတွန်းနှင့်ရုပ်ပြများကိုဖတ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုချစ်ခဲ့သည်။ ငါရေးခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းကတော့ငါမမှတ်မိဘူး။ ဒါဟာsurelyကန်အမှန်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် မူကြမ်းရေးဆွဲ ကျောင်းအတွက်ကျယ်ပြန့်။
JCC: သူတို့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်မမှတ်မိတယ် Jules Verne ဝတ္ထု. ရေအောက်ခရီးသွားလာ၏ 20.000 လိခ် o ကမ္ဘာမြေ၏ဗဟိုမှခရီး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစာဖတ်ခြင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေရာချမယ့်မြေပုံကိုရှာပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိဝေးလံခေါင်သီသောနေရာများရှိဆက်တင်များအတွက်
AL: မင်းအကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာကဘယ်သူလဲ။ သငျသညျတစ်ခုထက်ပိုနှင့်အားလုံးခေတ်ကနေရွေးချယ်နိုင်သည်။
JCC: ဒီစာရင်းကအဆုံးမဲ့ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ဂျူလီယိုကိုငါကိုးကားမယ် Verneဂျိန်း Austen, Agatha ခရစ်စ, Arthur Conan Doyle, Mary Shelley ... ပြီးတော့တစ်ခေတ်တည်းသားအချို့ - Ian Rankin, Jussi Adler-Olsen, Charlotte လင့်ခ်, Peter မေ, Manuel VázquezMontalbán ...
AL: ခင်ဗျားစာအုပ်ထဲမှာတွေ့ချင်၊ ဖန်တီးချင်တာရှိပါသလဲ။
JCC - ကျွန်တော့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစွဲမက်ခဲ့တယ် ရှားလော့ဟုမျး.
JCC: ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကအရူးတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ မည်သည့်အရာထက်မဆို presbyopia အတွက်ကွန်ပျူတာကောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်သင့်တော်သောမှတ်စုစာအုပ်တစ်ခု။ စိတ်ငြိမ်သက်မှု၊ တေးဂီတအနည်းငယ်၊ အနည်းငယ်သာ။
JCC: အိမ်မှာ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မ, ပြဿနာမရှိပါဘူး။
JCC: စာကောင်းကောင်းမခွဲခြားဘဲကျားမခွဲခြားဘဲ။ ငါယေဘုယျအားဖြင့်ဖတ်လို။
AL: အခုဘာဖတ်နေတာလဲ စာရေးခြင်းလား။
JCC: ယခုငါဖတ်သည် အဆိုပါ Marcus အကျိုးသက်ရောက်မှုမှ ဦး စီးဌာန Q စီးရီးမှ Jussi Adler-Olsen။ ငါ၏ပထမ ဦး ဆုံးမှတ်စုပြင်ဆင်နေပါတယ် စစ်ဆေးရေး Monfort ၏ဆဌမအရစ်ကျ.
JCC: စာအရေးအသားသည်ယုံကြည်ခြင်း၏လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြေညာသူကောင်းတစ် ဦး ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းသည်အံ့ဖွယ်အလုနီးပါးဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာဌစာဖတ်သူများပိုကောင်းလာပြီနေကြသည်နှင့်၎င်းသည်ကောင်းသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေသည့်အချိန်ကာလပြီးနောက်ကျန်ရှိနေသောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။
JCC: ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများသည်ထိုအတိုင်းပင်ဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်တွေးမိသည် ပိုကောင်းတဲ့လူဖြစ်ကြကုန်အံ့ပိုပြီးထောက်ခံနှင့်ကြင်နာ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်လုံးဝမရှင်းဘူး အဲဒါကငါ့ရဲ့ဆန္ဒပဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်ရှိစာပေ » စာပေ » အင်တာဗျူး » Julio Cesar Cano ။ စစ်ဆေးရေး Monfort ကိုဖန်တီးသူနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း